Forum serasera malagasy Lisitry ny lohahevitra - Dinika forum.serasera.org
Dia rehefa tena hitady namana akaiky kokoa ianareo dia ity forum ity ampiasaina. Ato ihany koa valiana. Raha misy mariazy raikitra na zaza teraka dia mba ampidiro amin'ilay hoe Vavolombelona :) Natao ho an'ny mitady namana ihany ity lohahevitra iray ity. Raha azo atao dia mba mametraka solonanarana hahafahan'ny namana mamaly anao.
36265 ny 20/Apr/2021 10:25
Tsy nataoko hoe zava-kanto satria malalaka be izany. Eto no hanaovanao ny resaka momba ny artista sy ny hirany.
28668 ny 19/Mar/2022 07:24
Nosokafana manokana ho an'ny Diaspora malagasy. Ahitanareo izay mety ho resaka azo atao momba ny gasy any andafy.
15411 ny 15/Apr/2021 16:28
Eto no ametrahanareo lahatsoratra, eritreritra, zavatra tianareo hozaraina amin'ny namana.
54007 ny 22/Jun/2022 18:44
hoy ledala 0
Fahampalalam-baovao sy torohevitra ary dinidinika momba ny fahasalamana. Raha misy dokotera ato amin'ny namana dia isaorana manokana amin'ny fandraisana anjara ato amin'ity dinika iray ity.
22339 ny 22/Sep/2021 17:45
Eto no ifampidinihan'ireo efa ray aman-dreny momba ny fanabeazana ny zanany. Na koa ho an'ireo izay manabe tanora.
7369 ny 28/Jun/2022 20:02
Dinika sy adihevitra momba ireo taranja rehetra @ fanatanjahantena. Ny fitantanana sy ny ministera sy izay spaoro rehetra.
7237 ny 25/Jul/2020 06:09
Nanaovana lohahevitra manokana ny fety sy lanonana mety hihaonan'ny namana. Raha manana hetsika na fety mety hihaonana ianareo dia ampidiro ato.
19595 ny 23/Dec/2019 07:20
Ireo tora-po ara-piarahamonina. Olana sy vahaolana. Fisehoan-javatra andavanandro azo zaraina amin'ny namana.
21947 ny 09/May/2021 03:54
Resaka momba ny fiarakodia. Ho an'ireo mpitia fiara-kodia. Fizarana traikefa. Vahaolana teknika. Fanovana na fanamboarana fiarakodia. Vaovao momba ny fihaonan'ny mpitia fiarakodia.
2875 ny 25/Jul/2020 05:56
Toerana hametrahana ny firariantsoa ho an'ny namana nahazo fahasoavana, tonga tsingeritaona nahaterahana, fifankaherezana amin'ny sarotra. Eto ihany koa no hifampiarahabana amin'ireo namana vao tonga.
4905 ny 20/Oct/2020 02:07
Tsy haiko izay iheveranareo ny atao hoe fitiavana sy ny vokany. Fa raha manana hevitra momba izany ianareo dia tongava ato. Ity lohahevitra ity dia mety misy zavatra tsy ho zakan'ny zaza tsy ampy taona. Noho izany dia sakanana mafy tsy hamaky ny zavatra ato ireo latsaky ny 15 taona. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fanafintohinana mety hitranga ho an'ireo izay mamaky ny dinika ato ny mpitantana.
72855 ny 30/Jun/2022 08:37
Mazava ho azy ny lohateny. Ato miresaka momba ny fivavahana sy ny mombamomba azy. Ny fanontaniana rehetra mipetraka... sy ny valiny.
156382 ny 08/Jun/2022 23:57
Mandrapahatongan'ny site hatsikana dia azonareo apetraka ato aloha ny hatsikana fantatrareo. Hitsikiana.
55733 ny 01/Jul/2022 06:18
Vaovao na sombim-baovao nalaina tamin'ny gazety. Iangaviana mba hapetraka ny gazety sy ny daty ary ny rohy internet (raha nalaina tamin'ny internet) nakàna azy. Iangaviana mba hapetraka ny gazety sy ny daty ary ny rohy internet (raha nalaina tamin'ny internet) Ny hevitra voalohany rehetra dia tsy maintsy lahatsoratra avy amin'ny gazety.
4514 ny 22/Apr/2020 08:50
Dinidinika momba ny tranga idiran'ny lalàna sy ny fitsarana. Fanazavana ireo lalàna tsy mazava. Irariana ny hidiran'ireo mpahay lalana ato.
2201 ny 29/Mar/2021 04:46
Ireo resaka rehetra mikasika ny informatika. Na logiciel na hardware sy ny sisa... mizarï¿½ talenta eto. Aza adino fa azonao atao koa ny mandeha ao amin'ny infogasy.net mampiasa ny solonanarana@serasera.org sy ny tenimiafina. Ny solonanarana sy ny tenimiafina dia ilay fampiasanao eto amin'ny serasera.
4839 ny 25/Feb/2021 07:56
Ato no ametrahana ireo dinidinika mikasika ny kolotsaina malagasy. Ny maha-malagasy rehetra izay voaraikitra ao anatin'izany kolotsaina izany. Lalao, dihy, fombafomba sy ny sisa.
6623 ny 07/Jun/2022 12:55
Eto no hametrahanao ny tsikera na ny fankasitrahana ny takelaka. Hanampy be dia be anay ny filazanao izany eto fa aza matahotra mihitsy. Tsiky dia ampy.
15786 ny 08/Mar/2022 22:21
Ato kosa indray no ametrahanao ireo adihevitra politika isankarazany... ho hita eo ihany na politisianina koa ny namana.
124450 ny 01/Jul/2022 09:21
Resaka natokana ho an'ny vehivavy ihany ny ato. Dia miala tsiny ho an'ny lehilahy izay mety hahazo teny maharary amin'ny andriambavilanitra ary raha mijerijery ato. Ity lohahevitra ity dia mety misy zavatra tsy ho zakan'ny zaza tsy ampy taona. Noho izany dia sakanana mafy tsy hamaky ny zavatra ato ireo latsaky ny 15 taona. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fanafintohinana mety hitranga ho an'ireo izay mamaky ny dinika ato ny mpitantana.
37828 ny 04/Oct/2021 17:55
Ato no ahitana ireo resaka mikasika ny lehilahy na momba ny inona na momba ny inona. Aza misalasala. Ary ianareo vehivavy aza mijerijery ato sao menatra. Ity lohahevitra ity dia mety misy zavatra tsy ho zakan'ny zaza tsy ampy taona. Noho izany dia sakanana mafy tsy hamaky ny zavatra ato ireo latsaky ny 15 taona. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fanafintohinana mety hitranga ho an'ireo izay mamaky ny dinika ato ny mpitantana.
26516 ny 22/Jun/2022 19:33
Ento no hitafantsika izay rehetra mahakasika ny sakafo. Hifanolorana fomba fahandro, sakafo mahavelona sy mahasalama. Vaovao mahaliana sy mahafinaritra ary mahasoa momban'ny sakafo ihany koa. Mazotoa (homana) ary tompoko !
12117 ny 04/Sep/2020 07:08
Indrindra indrindra resaka manokana momba ny sarimihetsika malagasy. Fantatro fa misy mpilalao sarimihetsika vitsivitsy ato ka hahafally azy izany.
3322 ny 25/Feb/2021 07:45
Eto no ametrahana sy hahitanao ireo soso-kevitra rehetra momba ny takelaka serasera.org rehetra. Ato mantsy izy mba azo asiana valiny.
2044 ny 24/Dec/2020 07:48
Apetraho ato ny takelaka mahaliana anao dia araho fanazavana sy izay antony mahaliana anao momba azy. Tsy toerana fanaovana dokambarotra akory ity fa fizarana fotsiny. Voarara ny
Dokambarotra be fahatany
Fanaratsiana be fahatany
1933 ny 27/Dec/2021 03:34
Eto no ametrahana ireo tetikasa (projet) sy vinavina mety hiaraha-manao ho an'ny namana. Aza misalasala miantso ny namana hiara-midinika sy milaza izay fanirianao ato.
1449 ny 14/Sep/2021 21:54
Toekarena amin'ny ankapobeny. Rehefa mampiditra politika tsinona dia tsy maintsy mampiditra toekarena fa sao dia...
2329 ny 05/May/2021 14:03
Resaka momba ny tontolo iainana eto Madagasikara
1920 ny 06/Dec/2019 07:11
Raha misy zavatra mahaliana na mahatsikaiky na manafitohina any amin'ny toerana misy antsika tsirairay any, ka azo iadian-kevitra, dia ampidiro eto e ! Raha tsy azo sokajiana ho ao anatin'ireo lohahevitra hafa efa misy mazava ho azy :)
5384 ny 03/Sep/2020 19:41
Lazao eto ny vaovao maika tokony holazaina na avy eto Madagasikara na avy any andafy. Vaovao tianao holazaina amin'ny namana sy ny mpitsidika rehetra.
2191 ny 09/Aug/2019 12:25
Izay zavatra tianao hozaraina amin'ireo namana hafa afaka mamaky ity forum ity. Ato no ilazao azy.
4049 ny 07/Dec/2019 05:21
Ato no ahitana ny soso-kevitra mikasika ny site http://vetso.serasera.org izay misokatra ny 3 Oktobre 2003
1114 ny 11/Oct/2019 10:11
Resaka momba ny fikolokoloana zaridaina, voninkazo, zavamaniry... fifanakalozan-kevitra momba ny teknika fambolena voninkazo sy ny sisa.
1442 ny 06/May/2019 05:16